Waa Kuma Bedelka Saxda Ee Macalin Klopp ? Steven Gerrard Ma Awoodidoonaa Inuu Shaqadaan Qabto? – Kooxda.com
Home 2017 May Ingiriiska, Suuqa, Wararka Maanta Waa Kuma Bedelka Saxda Ee Macalin Klopp ? Steven Gerrard Ma Awoodidoonaa Inuu Shaqadaan Qabto?
Waa Kuma Bedelka Saxda Ee Macalin Klopp ? Steven Gerrard Ma Awoodidoonaa Inuu Shaqadaan Qabto?
May 19, 2017 · by	Jamuuni · 0
Kooxda Liverpool ayaa qaab ciyaareed wanaagsan qaadanayesa waxaana kooxdaan xilli ciyaareedkaan laga doonayaa inay kusoo gaba gabeeyso guul si ay kaga mid noqoto kooxaha ka qeeyb galaya tartanka Champions League.
Liverpool ayaa inta badan kooxda keensata xidig ajaaniib ah kuwaasi oo wax badan caawinkaraan kooxda Liverpool , balse kooxda waxaa laga yaabaa markaan in mid kamid ah xidigeheeda ay laso wareegto.
Macalinka kooxda Liverpool Klopp ayaa sheegay in Steven Gerrard uu yahay shaqsiga ka bedelidoono shaqada tababarinimada ee kooxda Reds ,waxaana halyeeygaan uu damacsan yahay in Gerrard oo keliya qabankaro shaqadaan.
”Waan u sheegay haddii aan ka tago kooxda ama ay kooxda i buriso inaan waxba iga gelin shaqsi kale ee guulaha gaarsiinkara kooxdaan,waxaana keliya doonayaa inaan arko isagoo kooxda guulo ku hogaaminaya,” ayuu Klopp u sheegay Times.
Steven Gerrard ayaa loo magacaabay MAcalinka 18 sano jirada ee kooxda Liverpool waxaana uu damacsan yahay inuu wax badan ka caawiyo kooxdaan.